Simudzira WordPress ku2.05 pasina kukanganisa nzvimbo yako! | Martech Zone
Mugovera, October 28, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ini ndinoda WordPress uye ndinoikurudzira kune vese vatengi vangu. Nhasi, vhezheni itsva kwazvo yaburitswa. Unogona kuverenga pamusoro pekugadzirisa uye kurodha pasi iyo yekuvandudza pano. Heano mamwe matipi ekuvandudza:
CHERECHEDZA: Edza kudzivirira 'kubiridzira' iyo kodhi kodhi paWordPress, zvinoita kuti kukwidziridze kuve nyore. Ndine 'hacks' mashoma asi ini ndinochengeta zvakanyorwa kuitira kuti pandinotora download yazvino vhezheni, ndinogona kugadzirisa zvangu ndoenderera mberi. Zvakare dzivisa kuisa chero mhando remhando mafaira kana maforodha mune chero dhairekitori kunze kweako netori-gutsikana forodha.
Chero bedzi iwe usati wabira WordPress, iyo yekuvandudza maitiro yakatwasuka-mberi (Mifananidzo ndeye Kutya Kuendesa 3.5.5)
1. Vhura FTP Client yako, sarudza mafaera ese kubva kuWordPress kusimudzira asi BUDISA iyo netori-gutsikana forodha. Kopa pamusoro pemafolda aripo uye mafaera.
2. Zvino, vhura iyo netori-gutsikana dhairekitori pane kwako sosi uye kwaunoenda folda. Kopa pamusoro pe index.php faira.
3. Pekupedzisira, rummage kuburikidza ne netori-gutsikana maforodha pane kwako sosi uye kwaunoenda folda. Kopa pamusoro pemusoro uye mapulagini pazvinenge zvichidikanwa, kudzivirira kudzima chero eema plugins nematimu awakawedzera nekugadzirisa.
4. Nhanho yako inotevera ndeyekungopinda kune yako Administrative interface (wp-admin). Iwe unozokurudzirwa kukwidziridza dhatabhesi yako. Dzvanya bhatani uye wapedza!
Ikoko iwe unayo, iwe wakakwidziridzwa. Ndinovimba izvi zvinokubatsira kunze!
Gumiguru 29, 2006 na10: 53 PM
Gumiguru 30, 2006 pa 7:44 AM
Gumiguru 30, 2006 na7: 26 PM